Akhriso: Warbaahinta Carabta Oo Soo Bandhigay Suurtogalnimada Dagaal Toos Ah Oo Dhex Mara Turkiga Iyo Masar - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAkhriso: Warbaahinta Carabta Oo Soo Bandhigay Suurtogalnimada Dagaal Toos Ah Oo Dhex Mara Turkiga Iyo Masar
Tripoli (JO) – Wargeysyada dalalka Carabta ayaa ka hadlaya wararka ka soo kordhaya qalalaasaha Libya ka dib markii hadal lama filaan ah uu ka soo yeeray madaxweynaha Masar Cabdifitax Al-Sisi.
Wuxuu Sisi sheegay in ciidamada dalkiisa “ay awood u leeyihiin in ay si degdeg ah ay wax uga badalaan dhibaatada dagaal ee Libya ayna ku guuleysan karaan.”
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Mevlüt Çavuşoğlu, ayaa dhankiisa sheegay in “Ciidamada Qaranka Libya” ee uu hoggaaminayay Janaraal Khilafa Xaftay, looga baahan yahay in ay ka baxaan magaalada Sirte iyo saldhigga ciidamada cirka ee Al-Jafra.
Dowladda Turkiga ayaa dooneyso in tallaabadaas la qaado ka hor inta aan la gaarin heshiiska xabad joojinta ah ee ka dhexeeya Khalifa Xaftay iyo Dowladda Beesha caalamku aqoonsan tahay.
Dowladda Masar ayaa taageereysa Khilafa Xaftay iyo xoogaggiisa loo garanayo “Ciidamada Qaranka Libya”, halka Turkiga uu taageerayo Dowladda Caalamka laga aqoonsan yahay.
Sharciyadda faragelinta Libya